Qaybta 1. Maxay rabaan in ay hoos ka macruufka 9?
Qaybta 2. kaabta iPhone / iPad ka hor inta hoos ka macruufka 9
Qaybta 3. Tallaabooyinka hoos iPhone / iPad ka macruufka 9 ilaa macruufka 8.4
Qaybta 4. Soo Celinta xogta laga gurmad Lugood / iCloud
Sida aad ka arki, music, video, sawiro iyo document files yihiin kuwa badbaadayaa kaarka SD ee Samsung Galaxy S5 ah. Thanks to Android nooca furan, waxyaabaha kuwaas oo si fiican u heli karo. Si gurmad ku jira sida, waxaad u baahan tahay ma software laakiin cable USB ah. Read socda hagahan si aad u aragto sida ay u gurmad Samsung S5 in ay PC.
In kasta oo xaqiiqda ah in macruufka 9 ayaa la filayaa in ay ka buuxeen qaababka cusub oo weyn, waxaa weli jira qaar ka mid ah oo naga mid ah oo ma doonayo inuu sii macruufka 9. Waxaa jira dhowr sababood oo aad ku doonaysid in hoos ay u macruufka 8. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah ;
Waxaa laga yaabaa inaad ma noqon in qaab qaababka cusub ee macruufka 9 leeyahay in ay bixiyaan oo dhan oo aad rabto in aad dib ugu jidka qalab aad shaqeeyay ka hor.
Qaar ka mid ah barnaamijyadooda aad laga yaabaa in aanay u shaqayn sida ay loo isticmaalo in lagu ee macruufka 8 oo aad rabto in aad dib ugu heli lahaayeen barnaamijyadooda wax soo saar leh, jidka aad kaliya in ay ka shaqeeyaan ay isticmaalay.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa in qalab aad waddaa in yar si tartiib ah ku macruufka cusub 9 oo aad dib ugu ammaan kartiyeed doonayaan in qalab aad.
Arimahaa oo dhan ayaa dhab ahaan wax badan caadi ahayn waxaad u malaynaysaa in kastoo, haddii aad rabto in aad hoos iska hubi in aad hore u samayn ka hor Apple istaago saxiixa macruufka ka weyn 8 version. Waxay inta badan ay tan u sameeyaan maalmo yar ka dib markii uu shaaciyey ku macruufka cusub.
Ka hor inta aadan hoos karaa in macruufka 8, waxaad u baahan tahay in ay dib u kor u qalab aad. Waxaad samayn kartaa sidaas adiga oo isticmaalaya iCloud ama Lugood. Midka aad doorato wuxuu gebi ahaanba waa mid adiga kaliya inta aad loo xaqiijiyo in gurmad qalab aad. Si gurmad isticmaalaya iCloud Tubada on Settings> iCloud> kaabta iyo joog xiriir Wi-Fi ilaa habka dhamaato.
Si gurmad isticmaalaya Lugood xiro qalabka aad si aad u computer ka dibna riix on File> Qalabka> kaabta. Hayso qalab aad ku xiran ilaa gurmad la soo gabagabeeyo.
Hadda oo aad leedahay raad raac ah qalab aad, waxaa la gaadhay wakhtigii si ay dib ugu macruufka 8 hoos.
Waxaa muhiim ah in la xuso in macruufka 8 laga yaabaa ma jiri maalmo yar ka dib macruufka 9 maraakiibta. Sidaa darteed, haddii aad u malaynayso inaad ka qoomameyn casriyayn ah in macruufka 9, waa fikrad wanaagsan in aad nuqul ka mid ah file macruufka 8 inay dib ugu soo laaban. Si aad u hesho nuqul this raacna Jidka: yourusernamefolder / Library / Lugood iyo gudaha iPad updates software ama updates software iPhone, waxay helaan macruufka 8.4.2.ips file.
Si aad u soo celin macruufka 8, kaliya furaysto qalab aad galay your computer iyo abuurtaan Lugood. Hel file ipsw hadalnay kor ku xusan oo la furo. macruufka 8 la doono soo celiyo si aad telefoon inkastoo oo dhan barnaamijyadooda non-stock iyo xogta laga tirtirayaa in geeddi-socodka.
Sidoo kale waa inaynu sheegeynaa in sabab Mac tirtiri doonaa files ipsw si dhici karta inaadan haysan mid dambeeyay.
Nasiib darro aad u soo celiyaan macruufka aad 9 xogta si macruufka 8.4 si ay taasi dhici karta mushkilad ka awoodin noqon doonaa. Ka dib hoos u qalab aad ka muuqan doontaa calaamad cusub si waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u soo kabsadaan xogta aad ka Lugood ama gurmad iCloud si ay u shaqeeyaan macruufka 8.4.
Waxaad samayn kartaa sidaas adiga oo isticmaalaya Wondershare Dr.Fone ee macruufka (kabashada xogta iPhone). Dr. Fone waa one stop xal inuu kaa caawiyo inaad ka soo kabsado oo dhan aad xiriir la tirtiro, fariimaha, Photos, qoraalada iyo macluumaadka kale qalab macruufka ah. Tani waa software aad doonaysid in aad u baahan tahay haddii aad doonaysid in aad ka bogsanayaan oo dhan macruufka aad 9 xog ku saabsan arrimo aad 8. Codsigan shaqeeyaa inuu ka soo kabsado xogta haddii aad si qalad ah la tirtiro ama aad macruufka ayuu u kharribmay sida uu yahay kiiska marka aad hoos. Bal aynu eegno sida loo isticmaalo.
Sida loo soo saaro iyo kabsado xogta ka kaabta Lugood
Talaabada Koowaad: filayaa, in aad soo download lagu rakibay Wondershare Dr. Fone si aad u computer. Waxay u ordaan oo ka dibna riix "kabsado file kaabta Lugood" Ka dooro file gurmad midig ka kuwa la heli karo, ka dibna riix Start Scan.
Tallaabada Labaad: Dhamaan xogta KMG-up la soo bandhigi doono suuqa kala socda. Dooro kuwa aad jeclaan lahayd inay ka soo kabsadaan ka dibna riix "kabsado" oo waxaan iyaga ku badbaadin.
Sida loo Soo Celinta ka gurmad iCloud
Halkan sida loo sameeyo haddii gurmad ahaa iCloud.
Tallaabada Koowaad: ka dib socda Wondershare Dr. Fone, dooro " kabsado iCloud files ee kaabta ". Waxaa lagaaga baahan doonaa in aad t geli username iyo password iCloud.
Tallaabada Labaad: Waxaad markaas u baahan doontaa inaad soo bixi gurmad iCloud faylka. Marka laguu oggollaan inaad codsiga, ka heli doontaa oo dhan iCloud files gurmad ah oo ku saabsan xisaabtaada. Dooro mid aad rabto inaad ka soo kabsadaan oo guji "Download."
Tallaabada Saddexaad: Daaqadda gujisid muuqata ka, dooran faylasha aad doonaysid inaad kala soo baxdo. Ka dib oo waa inaad iskaan content iCloud ah. Riix batanka ah Scan.
Talaabada Afraad: Marka scan la dhammeeyo, waxaad ku eegaan karo xogta ku saabsan iCloud gurmad file oo u soo celiso qalabka macruufka.
Sida loo dhoofiyo iyo Print Facebook Rasuulka ee macruufka
> Resource > macruufka > Ma rabtaa inaad hoos ka macruufka 9 ilaa macruufka 8.4? Sida loo sameeyo